Pvdf အိတ္စြပ္အိမ္ရာ-တရုတ် Pvdf အိတ္စြပ္အိမ္ရာ၊စက်ရုံ–Sffiltech
Pvdf အိတ် filter filter ကို
အရည်အသွေးမြင့်အရည်စစ်ထုတ် pvdf ပစ္စည်းပလပ်စတစ်ရေအိတ်အိမ်ရာ
၁။ pvdf ပစ္စည်းပလပ်စတစ်ရေအိတ်အိမ်၏အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်
bag2 #, 1 #,5# အတွက်
၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆင့်မြင့်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုပင်လယ်ရေသန့်စင်ရာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးနိုင်သည်။ ကြာရှည်စွာလည်းယိုစိမ့်မှုပြuseနာမရှိပါ။
PVDF လုပ်နိုင်တဲ့အပူချိန် 150Deg ။ အိတ် filter filter တစ်ခုအတွက်အလေးချိန် ၂၆ ကီလိုဂရမ်ရှိသည်။
အရည်အသွေးမြင့်မားသောထိန်းချုပ်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ pvdf အိတ်စစ်ထုတ်သည့်အိမ်သည်သုံးစွဲသူစျေးကွက်တွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်။
၂။ pvdf ပစ္စည်းပလပ်စတစ်ရေအိတ်အိုး၏အမျိုးအစားများ -
2 # pvdf ပစ္စည်းပလပ်စတစ်ရေအိတ်အိုး
5 # pvdf ပစ္စည်းပလပ်စတစ်ရေအိတ်အိုး
pvdf ပစ္စည်းပလပ်စတစ်ရေအိတ်အိမ်၏ 4. Apvdflications
ဆေးသုတ်သည့် pvdf ပစ္စည်းပလပ်စတစ်ရေအိတ်အိုး
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: HS ကုဒ်: ပလပ်စတစ်အိတ် filter ကိုအိမ်ရာအဘို့ 8421392200
အဓိကထုတ်ကုန် - ဖုန်စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အရည်စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစက်များ
1. မိုက်ခရို filtration filter ကိုအိတ်
Polyester micro filter အိတ်၊ PE micro filter အိတ်၊ Micro filter အိတ်၊ ၅ မိုက်ခရို filter အိတ်၊ ၁၀ micro micro အိတ်၊ PP micro filter အိတ်၊ နိုင်လွန် micro filter အိတ်၊ ptfe micro filter အိတ်၊ စွန်းထည်စတီး micro micro filter အိတ်နှင့် ၀.၂ မှ ၀ ။ မိုက်ကရိုဖုန်းမှ 5micro နှင့်။
အရည် filter ကိုအိတ်အိမ်ရာ
အရည် filtration နှင့်ခွဲခြာထုတ်ကုန်
ကျည်တောင့် filter ကိုစနစ်
ပိုက် filter ကိုစနစ်
2. ဖုန်စစ်ထုတ်ခြင်း ----- filter ကိုအိတ်
Polyester filter ကိုအိတ်, polyester Anti-stat filter ကိုအိတ်, polyester filter ကိုအိတ်ရောနှော, အမြှေးပါးနှင့်အတူ polyester filter ကိုအိတ်, polyester filter ကိုအိတ်ရေနှင့်ရေနံတွန်းလှန်, polyester filter ကိုအိတ်အထူးအမျိုးအစား, စစ filter ကိုအိတ်, aramid filter ကိုအိတ် pps filter ကိုအိတ် acrylic filter ကိုအိတ်, p84 filter အိတ်, ptfe filter ကိုအိတ်, ptfe ရောနှော p84filter အိတ်, HST filter ကိုအိတ်, Fiberglass filter ကိုအိတ်, PTFE ရောနှော pps filter ကိုအိတ်, Basalt filter ကိုအိတ်နှင့် polyester filter ကိုအထည် acrylic filter ကိုအထည်။ P84 filter အထည်, pps filter ကိုအထည်နှင့် Fiberglass filter ကို farbic စသည်။
အလိုအလျောက်စီစစ်အိတ်ပြွန်လိုင်း၊ Semi-Automatic filter အိတ်ပြွန်လိုင်း၊ Tripe-needle filter အိတ်အပ်ချုပ်စက်၊ နှစ်ဆလိုအပ်သောအပ်ချုပ်စက်၊ လက်ရှည်အပ်ချုပ်စက်၊ သော့ခတ်အပ်ချုပ်စက်၊ လျှောစက်၊ ဖြတ်စက်၊ အောက်အထိုးထိုးစက်၊ အထုပ်စက်များ၊ အပ် လာကြတယ်လိုင်းနှင့်။
အသုံးပြုမှု / အခါသမယ
ထုတ်ကုန်စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အစိုင်အခဲ / အရည်များခွဲခြင်းကဲ့သို့သောစစ်ထုတ်အိတ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
- ဘိလပ်မြေ၊ ဂျိုက်စ်နှင့်ထုံးလုပ်ငန်း
ပလပ်စတစ်အိတ် filter filter ကိုအိမ်၊ Paint၊ ဘီယာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ၊ ဆေး၊ အလှကုန်၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းများ၊ , ပုံနှိပ်မင်, စက်မှုစွန့်ပစ်ရေ, ဖျော်ရည်, စားသုံးဆီဆီ, ဖယောင်း။
ပလပ်စတစ်အိတ် filter ကိုအိမ်ရာ
- မြင့်မားသော filtering ကိုထု